ADHD uye IQ. Ndezvipi zvinhu zvinokanganisa kuita kwedzidzo | Kudzidziswa Kwekuziva
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ndeye-kutanga-kutanga hutachiona hwematumbo hunoratidzirwa nematambudziko ekutarisira, hyperactivity uye kusashanda.
Rimwe rematambudziko anowanzo kuperekedza chirwere ichi rine chekuita nenzvimbo yechikoro: muvana nevechidiki vane chirwere ichi vanoona kazhinji kuita shoma. Kutanga kubva ku data iyi, boka revaongorori aifarira kuziva zvimwe zvinhu zvinokwanisa kufanotaura nezvechikoro kudzidza.
Imwe yeiyo bvunzo dzechokwadi dzinoshandiswa kakawanda mukuongorora maitiro ekuongororwa kweADHD ndeye WISC-IV; iyo muyedzo wezinga rehungwaru iro rinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji (semuenzaniso mukuongororwa kwemaitiro neuropsychological kune vanofungidzirwa dyslexia) uye iyo, kupfuura ruzivo rwekutaura, inopa zviratidzo pane dzimwe nzvimbo dzinonyanya kuve dzinotevera: kutaura kwechirevo kugona , kugona-kuona kwemaonero ekugona kutaura, kutaura kwekutaura uye kubata nekukurumidza.
Vatsvagiri vakatarisa pazviyero zvakasiyana-siyana zvakafanofungidzirwa neWISC-IV kuti vanzwisise kuti ndedzipi dzainyanyobatsira kufembera kuita kwechikoro pamberi peAADHD.
Boka revana vane makore ari pakati pe8 kusvika gumi nemaviri (hafu yakawanikwa vaine ADHD uye hafu yakajairika kukura) vakaedzwa zvataurwa pamusoro apa, WISC-IV, uye mimwe miedzo yakafanana ine chekuita nekudzidza kwechikoro, i.e. avo vanotarisirwa muKTEA (kuverenga uye masvomhu).
Chinangwa chevadzidzi ndechekuona kuti ndedzipi idzo WISC-IV zvikoro (ongororo dzehungwaru) dzakanyanyobatanidzwa nehuwandu hweyedzo dzezvikoro zvekudzidza.
Un mhedzisiro yekutangazvinoenderana netarisiro, zvaive seizvi zvinotevera: vana vane ADHD vaiita yakaderera kudzidzira kuita pane avo vane kujairika kukura.
Un chechipiri mhedzisiro chekutanga yaive yekutsvaga kweiyo IQ yepazasi muADHD. Usati wasvetukira kumhedziso, zvakakosha kuti uburitse iyo yekuwedzera data: iyo yakaderera uwandu muWISC-IV haina hanya nezviumbwa zvese asi yaive yakatemwa nemaindi maviri, i.e.Veral Kunzwisisa Index (izvo zvatingarerutsire mukukwanisa kuratidza kufunga kutaura) uyeKushanda Memory Index; Mune mamwe mazwi, iyo yakaderera mamakisi muIQ haina kumiririra kushoma kwekufunga kugona asi yaive nechekuita nezvimwe zvinhu (visuo-nzvimbo yekukurukurirana yekugona uye kugadzirisa kumhanyisa yaive, zvisinei, yakajairika).
Un chechitatu mugumisiro, pamwe chinonyanya kufadza, ndechekuti hukama pakati peADHD kuongororwa uye kubudirira mune zvedzidzo kwakave kwakaipiswa nezviwanikwa muVeral Kunzwisisa Index uye muKushanda Memory Index. Kunyanya, kuwanda muzvinyorwa zviviri izvi zveWISC-IV zvakatsanangura nezve makumi mashanu muzana ehukama pakati peADHD kuongororwa uye bvunzo dzekudzidza dzechikoro; kunyanya, yaive ndangariro yekushanda yaive nehuremu hwakanyanya, ichitsanangura 50% yehukama uhu (nepo makumi maviri muzana ichitsanangurwa nezviwanikwa muneVeral Kunzwisisa Index).
Nekudaro, kana tichienzanisa vana nevechiri kuyaruka neADHD zvine chekuita nekuita kwavo kwedzidzo, chikamu chakakosha chekusiyana kwacho chinogona kubva chaizvo mukushanda ndangariro uye nehunyanzvi hwekutaura nemuromo.
Un mhedzisiro yechina inozvarwa chete mukushanda kwendangariro. Kuenda kunoparadzanisaWorking Memory Index, vaongorori vakaongorora kuti ndechipi chezvirevo zviviri zvinoumba (Ndangariro dzeMienzaniso e Kurongwa Kwetsamba uye Nhamba) yainyanya kukosha pakuyananisa hukama pakati pekuongororwa kweADHD uye kuderedzwa kwedzidzo. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti chete iyo Kurongwa Kwetsamba uye Nhamba vakaita basa iri muukama.
ari mhedzisiro yazvino zvine chekuita nebasa rechikoro:Veral Kunzwisisa Index and the Kurongwa Kwetsamba uye Nhamba ose anoita seanokanganisa kuverenga kwekuverenga (zvese kubva pachinangwa chekuona kutsanangudza uye zvine chekuita nekunzwisiswa kwemanyoro) nepo, zvine hunyanzvi hwemasvomhu, kubva kutsvagiso idzi chete mavanga Kurongwa Kwetsamba uye Nhamba vanoita sekutsanangura kuoma kwevakomana vane ADHD vachienzaniswa nevaya vanekujairika kukura.
Iyo data inobuda mukutsvaga uku inoita kunge inotipa ruzivo rwakakosha. Kunyangwe isiri inopedza simba yekuongororwa kwemagetsi europsychological, iri nyore maitiro muedzo wekukura sekuti WISC-IV yatoita seinogona kutipa mamwe anobatsira mungozi zviratidzo pamberi pe ADHD kuongororwa.
Kunyanya, kuderedza kuwandaVeral Kunzwisisa Index kazhinji iwe unozoona matambudziko pakuverenga mumwana ane ADHD. Izvo zvakaoma zvichawedzera kutambudzika mukuvapo low low the Kurongwa Kwetsamba uye Nhamba inoita kunge ine mhedzisiro zvakare mune yemasvomhu chikamu, kunze kwekukanganisa nzvimbo yekuverenga.
Ngatitaure nezve kutarisirwa
Review: ADHD nebasa rechikoro rinoitirwa kumba
BIA - Italian bhatiri yeADHD. Ongororo yacho
Calub, CA, Rapport, MD, Friedman, LM, & Eckrich, SJ (2019). IQ uye kubudirira mune zvedzidzo muvana vane ADHD: Iyo misiyano mhedzisiro yemamwe mabasa ekuziva. Chinyorwa che Psychopathology uye Behaisheral Ongorora, 41(4), 639-651.
Nuckols, CC, & Nuckols, CC (2013). Iyo Yekuongorora uye Statistical Manual yeMental Dambudziko, (DSM-5). Philadelphia: American Psychiatric Association.
adhd, veruzivo rwekunzwisiswa kwemazwi, ruzivo, kushanda ndangariro, WISC-IV
ADHD uye IQ. Zvinhu zvipi zvinokanganisa kuita kwechikoro2020-03-012021-08-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/03/adhd-e-qi.-quali-aspetti-incidono-sul-rendimento-scolastico.png200px200px
Hukama pakati pezvisikwa, huchenjeri uye mabasa ehunyanzviZvinyorwa, Executive mabasa, Njere
Kurapa ADHD ne "vhidhiyo yemitambo"AdHD, Zvinyorwa, Kurapa